Nei nyika dzeAfrica dzichibhadhara mutero wekoloni muFrance kunyangwe ivo vakazvimirira? - Afrikhepri Foundation
Nei nyika dzeAfrica dzibhadharira mutero wekoloni muFrance pasinei nehurumende yavo?
Lwaizviziva here? Kunyangwe nanhasi, nyika zhinji dzeAfrica dzinoramba dzichibhadhara mutero wechikoloni muFrance, kunyangwe rusununguko!
Kune nyika ichangobva kuzvimiririra yaive yakakosha kuwana hukama neFrance. Sylvanus Olympio, mutungamiri wekutanga weRepublic of Togo, nyika duku muWest Africa, vakawana mhinduro yekugona kudzivisa vaFrance:
Kwete kuda kuramba kumbotambudzika Kudzora French, iye kusaina kugarwa chibvumirano wakatangwa na De Gaule, asi akabvuma ari kudzokera kubhadhara chikwereti wepagore kuFrance kuti anonzi makomborero vakawana panguva Colonisation French.
Iyi ndiyo chete mamiriro ezvinhu eFrance kuti asazoparadza nyika isati yaenda. Zvisinei, mari inofungidzirwa neFrance yaiva yakakura kudai kubhadharwa kwezvinonzi "chikwereti chekoloni" kwaiva pedyo ne40% yebhajami renyika mu1963.
Saka, mamiriro ezvinhu emari kuzvimirira Togo chete raiva isina kwazvo, uye kuti akunde izvi, Olympio akasarudza kubuda akarirasa ezvinhu dzakaiswa yaitonga France ari FCFA (Franc of French nyuchi dziri Africa) uye yakasarudza mari yenyika.
The January 13 1963, mazuva matatu gare gare, akatanga kudhinda manotsi itsva, mumwe kukupfura masoja (rinotsigirwa France) akakunda uye akauraya wokutanga akasarudzwa purezidhendi akazvimirira Africa: Olympio akaurayiwa ari ex French legionnaire, sergeant weuto Etienne Gnassingbé uyo, pakupfuura, akagamuchira panguva iyoyo chikwata chemadhora e612 kubva kumusangano weFrance wekugadzirisa basa rake.
Hope yaOlympio yaiva yekuvaka nyika yakazvimiririra uye ine simba. Asi pfungwa yacho haina kufanana nezvinodiwa neFrench.
The June 30 1962, Modiba Makura, purezidhendi Republic of Mali rokutanga, akasarudzawo kurega akarirasa mugadziriro FCFA (zvavakatemerwa 12 vachangotanga akazvimirira African nyika).
Zvechokwadi, nokuti Malian President, akasendamira zvakawanda kune mugovanisi upfumi, zvaiva pachena kuti Colonisation izvo huchiripo pamwe chibvumirano ne France, akava musungo, mutoro nyika kukura.
I19 November 1968, kufanana, Olympio, Keita achabatwa nechisungo chakatungamirirwa neumwe wekare weFrench legionary of Foreign Affairs, Lieutenant Moussa Traoré.
Kutaura zvazviri, panguva iyi inonetsa apo Africa wakarwira kuzvisunungura kubva joko European colonialism, France achashandisa mu kakawanda kare yaipinda Foreign Legion mari kuti nezvibhakera vouta akavhiyiwa pamusoro achangobva kusarudzwa mapurezidhendi:
Pana 1eri Mutungamiri 1966, Jean-Bedel Bokassa, aimbova wechikwata cheFrance, akaputira Dhavhidhi Dacko, mutungamiri wekutanga weCentral African Republic.
The January 3 1966, Maurice Yaméogo, purezidhendi Republic of Upper Volta, yava kunzi Burkina Faso wokutanga, akatambudzika kuparadza sangoulé lamizana, aimbova legionnaire French uyo akarwa French mauto Indonesia uye Algeria kurwisa nyika rusununguko
The October 26 1972 Kerekou aiva murindi akachengeteka ari President Hubert Maga, purezidhendi Republic of Benin rokutanga, wakandipa nevapanduki pamusoro mutungamiri, pashure vachipinda French kuzvikoro remauto 1968 1970.
Kutaura zvazviri, mumakore achangopfuura 50, 67 nhamba kwepfuti ezvinhu kwakaitika muna 26 nyika Africa, 16 nyika idzi vaimbova French misha, rinoreva 61% kuti the mu Africa yakatangwa mune zvekare maFolumbia.
Nhamba yekurohwa muAfrica nenyika
Ex French mapoloni
Dzimwe nyika dzeAfrica
Nhamba yekutora hurumende
Sezvinoratidzwa nhamba idzi, France inonyanya kushushikana, asi inoshanda mukuchengetedza simba rakasimba pamakoloni ayo pasinei nokuti sei, pasinei nemutengo.
Muna March 2008, aimbova Mutungamiriri weFrance Jacques Chirac akati:
"Pasina Africa, France inotenderera kune imwe yenhare yechitatu [yenyika]"
Mutungamiri waJacques Chirac François Mitterrand akamboporofita muna 1957 kuti: "Pasina Africa, France haichazovi neyakaitika muzana remakore rechigumi nemapfumbamwe"
Right ikozvino sezvo ndinonyora nyaya ino nyika 14 African vanomanikidzwa ne France, kuburikidza yaitonga chibvumirano, kuti 85% pakati reserves dzavo Reserve Bank of France aidzorwa rechiFrench Ministry of Finance. Kusvika ikozvino, ku2014, Togo uye nezveimwe nyika yeAfrica ye13 inofanirwa kubhadhara chikwereti chekoloni muFrance. Vatungamiri veAfrica avo vanoramba vanourawa kana kuti vanotambudzwa nekubvumira. Vaya vanoteerera vanotsigirwa uye vanopiwa mubayiro neFrance nehupenyu hunofadza, nepo vanhu vanotsungirira kushungurudzika uye kuora mwoyo.
Hurongwa hwakadaro hwakashata, hunopomerwa neEuropean Union, asi France haisati yakagadzirira kuita kunze kwehurongwa hwekoloniyamu iyo inomupa mari inenge madhora mabhiriyoni emadhora kubva kuAfrica, uye ne gore.
Tinowanzopomera vatungamiri veAfrica yehuori nekushandira zvido zvemarudzi ekuMadokero, asi pane tsanangudzo yakajeka yehutsika iyi. Vanozvibata nenzira iyi nokuti vanotya kuurayiwa kana kuti vari kutambudzwa kwekubatanidzwa. Vanoda kuzvibatanidza nehurumende ine simba kuti vazviponese pachavo kana kune utsinye kana matambudziko. Asi, kusiyana nekudzivirirwa kwevamwe, kuchengetedzwa kweWest West kunowanzopiwa mukutsinhana kwekurega kushumira vanhu vavo kana kuti zvido zvemarudzi.
Vatungamiri veAfrica vaizoshanda mukufarira kwevanhu vavo kana vaisawanzoshungurudzwa nekutyisidzirwa nenyika dzechikoloni.
In 1958, vachitya migumisiro pakusarudza rusununguko kuzorwa France, Leopold Sedar Senghor akati: "Kusarudza wokuSenegal vanhu, ndiwo rusununguko zvavanoda kuti kutora nzvimbo chete ushamwari France, kwete mukukakavadzana. "
Saka France yakagamuchira "kuzvimirira pamapepanhau" nokuda kwezvikwata zvayo, asi yakasaina mu "sangano rekubvumirana", ichinyatsojekesa ukama hwehukama hwavo neFrance, zvikurukuru zvibatanidza mari. Franc), iyo French education system, zvibvumirano zvehondo uye zvekutengeserana.
Heinoi 11 chikamu chikuru chekuenderera kwechibvumirano chekoloni kubvira makore 1950:
1.Chikwereti chechikomborero chekubatsira kweFrance koloni
Nyika ichangobva "kuzvimirira" inofanira kubhadhara zvivako zvekuvakwa zvakavakwa neFrance munyika iyo munguva yekoloni.
Ini ndichiri kushayiwa tsanangudzo pamusoro pemari, kuongororwa kwezvikomborero zvekoloni uye nemitemo yekubhadhara yakaiswa kune dzimwe nyika dzeAfrica, asi isu tiri kushanda pairi (tichibatsira nemashoko).
2.Kutora zvakananga zvekuchengetwa kwenyika
Nyika dzeAfrica dzinofanira kuisa mari yavo yenyika yose kuFrance kuBan central.
France akambomisa National matura gumi dzomuAfrica kubva 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo -Brazzaville, Guinea Equatorial Republic neGabon.
Imwe mitemo yemari inotungamirira boka rakasiyana-siyana renyika iri nyore nokuti rinotarisirwa neFrench Treasury, risingarevi kune hurumende hurumende dzakadai seUEMOA kana CEMAC. Pasi pemitemo yesungano yakagadzwa neBencent Bank yeCFA, imwe nhengo yeCentral Bank yenyika imwe neimwe yeAfrica inosungirwa kuchengetedza zvishoma 65% yezvokuchengetedza kwekunze kune imwe nyika mu "account of operations" yakaitwa mu Chivigiro cheFrance, pamwe chete nechimwe 20% chekubhadhara chikwereti chemari.
CFA mabhizimusi makuru anokonzera denga pachikwereti chinopiwa kunyika imwe neimwe yenhengo panguva yakaenzana ne20% yemari inowanikwa munyika yose mugore rapfuura. Kunyangwe kana BEAC uye BCEAO ine nzvimbo yepamusoro yefridhi yeFrench Treasury, zvikwereti zvezvebhadharo zvinowanikwa pasi pemvumo yeFrench Treasury. Izwi rekupedzisira ndiro iro reFrench Treasury iro raisa mari kune dzimwe nyika dzeAfrica nezita rayo paParis Stock Exchange.
Muchidimbu, kupfuura 80% yezvokuchengetedzwa kwenyika kune dzimwe nyika dzeAfrica dzinoiswa mu "nhoroondo dzebasa" inotungamirirwa neFrench Treasury. Iko mabhanga maviri eCFA ari maAfrica, asi havana mari yavo yemitemo. Idzi nyika pachavo hazvizivi, hadzisi kuziviswa, kuti mari yakawanda yekushandiswa kwevatorwa inobatwa neFrench Treasury ndeyayo seboka kana mumwe nomumwe.
Kuwana mari yezvivigiro zveFrench Treasury inofanirwa kuwedzerwa kune imwe nyika, asi hapana kubhadharwa kunotumirwa kune mabhangi kana nyika, kana nhoroondo dzekuchinja uku. "Cheki boka duku revakuru vakuru veFrench Treasury vanoziva zviyero mu" yebhizimisi makambani "apo mari iyi inotengeswa; kana kune purogiramu pane izvi zvikwereti; ivo vanorambidzwa kuparidzira mashoko aya kumabhangi eCFA kana mabhandi makuru eAfrica. "Anonyora Dr. Gary K. Busch
Inofungidzirwa kuti France inoshandisa madhora mabhiriyoni eAfrica mumari yaro, uye haiti chinhu chinoparadzanisa rutivi rwakasviba hweumambo hwekare.
Chinangwa chinoramba chiripo: Nyika dzeAfrica hadzina kuwana mari iyi.
France inovabvumira kuti vasvike chete 15% yemari yavo gore negore. Kana vachida zvimwe, nyika dzeAfrica dzinofanira kukwereta, pamatengo ekutengeserana, 65% yemari yavo yakachengetwa muHurumende yeFrance.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kunetseka, France inokwereta denga pamusoro pemari yemari iyo nyika inogona kubhadhara kubva kune imwe nzvimbo. Denga rakagadzirirwa pa 20% yemari yavo yevanhu kubva mugore rapfuura. Kana nyika dzinoda kukwereta kupfuura 20% yemari yavo, France ine veto.
Akambova Mutungamiri weFrance Jacques Chirac munguva pfupi yapfuura akataura nezvemari yenyika dzeAfrica mumabhangi muFrance. Heano vhidhiyo inotaura nezveFrench inoshandiswa. Heino zvinyorwa zvishomanana zvemuenzaniso: "Tinofanira kuva vakatendeseka uye tinoziva kuti mari yakawanda mumabhanki edu inouya chaizvoizvo nekushandiswa kweAfrica yeAfrica".
3.Izvo zvinokosha kupfuura chero ipi zvayo yakasvibiswa kana yakasikwa yakawanikwa munyika
France inonyanya kukosha pakutenga kwezvinhu zvose zvisikwa zvenyika yekare yaimbova makoloni. Inongova kungoramba kwayo kuti nyika dzeAfrica dzinobvumirwa kutsvaga vamwe vashandi.
4.Kunyanya kufarira zviFrench nemakambani muzvibvumirano zvepaguru uye zvivako zvevanhu
Mukupa zvibvumirano zvehuruzhinji, makambani eFrench anofanirwa kutaridzirwa pakutanga, uye pashure pekunge kune dzimwe nyika dzinotengeswa. Ichokwadi kuti nyika dzeAfrica dzingagona kuwana zvipiro zvemari zviri nani kune dzimwe nzvimbo hazvifungi.
Somugumisiro, kune vakawanda vekare veFrance, makambani makuru makuru uye vatambi vezvemari vari mumaoko emaFrance vanoenda kune dzimwe nyika. MuCôte d'Ivoire, somuenzaniso, makambani eFrance ane uye anotonga masangano makuru ehurumende - mvura, magetsi, foni, kutakura, mabheni uye mabhanga makuru. Zvinyorwa mubhizimusi, kuvaka nekurima.
Pakuguma, sezvandakanyora munyaya yapfuura, vaAfrica vava kurarama kune kondinendi yevaEurope!
5.Iko kodzero yekupa zvombo zvehondo uye kudzidzisa vakuru vakuru vehondo munyika
Nemhaka inyanzvi yokutarisira nyika dzidzo, anopa, uye "kudzivirira zvibvumirano" dzakabatana yaitonga chibvumirano, African vanofanira kutuma zvavo mukuru kudzidzisa vakuru muFrance kana French muchiuto kwezvivako.
Mamiriro ezvinhu mu kondinendi yakadai sokuti France yakadzidzisa nekupa mazana, kunyange zviuru zvevatengesi. Vanorara chero bedzi ivo vasingadi, uye vanogadziriswa kana zvichidikanwa pakubatanidzwa kana kune zvimwe zvinangwa!
6.Kodzero yekuFrance kuti isati yatora mauto uye inopindira muchiuto munyika kuti idzivirire zvido zvayo
Pasi pezita rokuti "Defense Agreements" rakabatanidzwa pachibvumirano chekoloni. France ine kodzero yekupindira mune zvehondo munyika dzeAfrica, uyewo kuisa masoja zvachose muzvigaro zvehondo uye zvigadziriswa, zvakanyatsotungamirirwa neFrench.
Mauto eFrance echiAfrica
Apo Mutungamiri Laurent Gbagbo weCôte d'Ivoire akaedza kugumisa kushandiswa kweFrance kwenyika yacho, France yakaronga hurumende. Munguva yakareba yekutyaira Gbagbo kunze kwesimba, matangi eFrench, hondo dze helicopter uye masimba akasiyana akapindira zvakananga mukurwisana, akadzingwa kuvanhu uye akauraya vazhinji vavo.
Kuwedzera Kuzvidza kukuvara, France inokurukura kuti French vemabhizimisi akabva arasika mamiriyoni akawanda emadhora ari nhokwe kusiya Abidjan 2006 (apo uto French yakaponda 65 unarmed zvavo uye vakuvadzwa 1200 vamwe.)
Mushure mokubudirira kwekufambiswa kweFrance, uye kuendeswa kwesimba kuna Alassane Ouattara, France yakakumbira hurumende yaO Ouattara kubhadhara chikwereti chemaFrench chekurasikirwa munguva yehondo yevagari vemo.
Kutaura zvazviri, hurumende yeUnattara yakavabhadhara kaviri izvo zvavakataura kuti vakarasikirwa pavakabva.
7.Mutoro wekuita chiFrench mutauro wepamutemo wenyika uye mutauro wezvedzidzo
Hongu, changamire. Unofanira kutaura chiFrench, mutauro weMolière! Mutauro wechiFrench uye sangano rekuparadzirwa kwetsika zvakasikwa. Inonzi "Francophonie" inounganidza nematare akawanda uye masangano akabatanidzwa ose anotungamirirwa neFrance Minister of Foreign Affairs.
Sezvakaratidzwa munyaya ino, kana French ndiyo chete mutauro waunotaura, iwe unogona kuwana zvishoma kudarika 4% ye ruzivo rwevanhu uye pfungwa. Iko kunopera.
8.Mvumo yekushandisa mari yekolonial France FCFA
Iyi ndiyo mhuru chaiyo yemari yeFrance, yakadaro yakaipa, inoshorwa neEuropean Union, asi France haisati yakagadzirira kuita kunze kwehutori hwemakoloni iyo inopa mari yeA500 bhiriyoni madhora kubva kuAfrica, gore.
Pakati pekuendeswa kwemari ye euro muEurope, dzimwe nyika dzeEurope dzakawana chiFrench chekushandisa. Vakawanda, kunyanya nyika dzeNordic, vakavhiringidzika uye vakapa France kuti vabvise nzira, asi vasina kubudirira.
9.Mvumo yekutumira mushumo wegore weFrance weyero uye kuchengetwa
Pasina ripoti, hapana mari. Kunyange zvakadaro munyori wemabanki ekutanga emakoloni, uye munyori wemusangano wegore negore wevashandi vezvemari vekare vaimbova makoloni inoumbwa neBritain inonyanya bhengi / pfuma.
10.Kutumidzwa kupinda muchibvumirano chemauto neimwe nyika, kunze kwekugadzwa neFrance
Nyika dzeAfrica munavo ndeyevo vane hukama huri pakati pezvematongerwo enyika. Nyika dzakawanda dzinongova nehukama hwemasoja nevekare vekoloni! (zvinonakidza, asi haugoni kuita zviri nani!).
Mumamiriro ezvinhu apo vanoda imwe kubatana, France vanovachengetedza zvakanaka kuita saizvozvo.
11.Mhosva yekubatana neFrance mumamiriro ezvinhu ehondo kana pasi rose
Masoja anopfuura mamiriyoni eAfrica akarwira kukundwa kweNazism uye fascism munguva yeHondo Yenyika Yechipiri.
mupiro kwavo zvichiwanzoregwa kana kushoma, asi kana uchifunga kuti wakatora mavhiki 6 chete Germany kurova France muna 1940, France anoziva kuti Africans aigona kubatsira kuchengeta "ukuru France" kuti ramangwana.
Pane chimwe chinhu chinenge chichifunga nezvepfungwa yehukama nehukama hweFrance neAfrica.
Chokutanga, France inodhakwa zvakanyanya nekupamba uye kushandiswa kweAfrica kubvira panguva yeuranda. Zvadaro pane kukwana kwakakwana kwezvakagadzirwa nekufungidzira kwevasiri vechiFrench kuti vafunge kupfuura zvekare uye tsika.
Pakupedzisira, France ane 2 masangano kuti muchando chose kare, inogarwa paranoid uye psychopathic "machinda mukuru" vanoparadzira kutya Apocalypse kana France vaifanira kuiswa kushandura, uye vane bhuku Pfungwa nguva dzose rinouya rwekudanana kwezana remakore rechi1900. Izvo ndezve: Mutungamiri weMari uye Budget yeFrance uye Mutungamiri Wezvekune dzimwe nyika muFrance.
Aya masangano maviri haasi kungotyisa kuAfrica chete, asi kuFrance ivo pachavo.
Zviri kwatiri kuti tisunungurire Africa, tisingakumbire mvumo, nokuti ini ndichiri kukwanisa kunzwisisa kuti muenzaniso wekuti 450 mauto eFrance muIvory Coast aigona kutonga sei vanhu vane 20 mamiriyoni?
Nzira yekutanga yevanhu pavanodzidza pamusoro pekuvapo kwemutero weFrance hwekoloni inowanzova mubvunzo: "Kusvikira rini"
Sezvo nhoroondo kuenzanisa, France akaita Haiti kubhadhara ano nerokuti bhiriyoni 21 1804 kuna 1947 (kusvika zana remakore nehafu) nazvo akaita kuti French Vaiita zvekutenga nekutengesa vachitevera abolition uranda uye kusunungurwa kwevaranda veHaiti.
Nyika dzeAfrica dzave dziri kubhadhara mutero wekoloni kubva kumakore ekupedzisira e50, saka ndinofunga kuti zana rekubhadhara rinogona kuva rakawandisa.
"Tinosarudza rusununguko muhurombo kuti tive nehutapwa muuranda". SEKOU TOURE
Mawuna Cherechedza Koutonin
Chinyorwa chepakutanga: http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/
Yakashandurwa neboka rekutaurirana re Collective Map
Funga upfumi - Napoleon Hill (Audio)
Kaaba yainga iine dombo dema rakaunzwa naMutumwa Gabriel
Kuzvidzora zuva nezuva - Martin Meadows (Audio)
Reply to Afrikhepri Foundation
Mazuva 29 apfuura
Kana kufungidzira uku kune chekuita neAlgeria, iwe unofanirwa kuziva kuti hapana akabvunza France kuti iuye kuzotitora. Uye kana iwe uchitaura pamusoro pezvivakwa, iwe unofanirwa kuziva kuti yanga isiri yemeso edu akanaka kuti zvipatara, migwagwa, zvikoro ... zvakavakwa asi yaive yekutarisa kugara zvakanaka kwemafungu evaigara ayo aitsvaira akananga kuAlgeria. . Vagadziri vatsva ava vaitiza kubva kuhurombo hwakanyanya nedenda rakanga rauraya vanhu ava.
Ndiani ane chikwereti?
Mumakore gumi nematatu ekuvapo kwevanhu ava vanofanirwa kunge vauya kuzorodza vagari, vagari ava vakaita zvakashata uye vakazvitenda kuti vakazvarwa paCote de St. Louis.
Vakadzingirirwa kana, panzvimbo pacho kuvhima vakapfuma vechikoloni kwete ivo FN vaive magedhe eiyo farce sezvo iwo ekupedzisira aigurwa muupfu nematsotsi asina nyadzi.
PN lambda vanouya vadzokere kunharaunda yavo yehudiki kwavanogamuchirwa neushamwari.
Vanoziva kuti dambudziko ravo raive iro sangano rakaipa revaponesi.
Mamirioni imwe nehafu vafi vakafirwa nekoloni France. Ndiani anofanira kubhadhara?
Algerian iri kure nekuita rusaruro sevarwere nguva dzose
hung in the makore 1962.